Warshadda Dhalada ee Glass - Soosaarayaasha Dhalada Glass Glass, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
100ml Dhalada cabitaanka
Caanaha, casiirka, biyaha waxaa lagu keydin karaa haanta ciriiriga ah iyadoo aan la qaadan karin booska qaboojiyaha ee kooban.
Dhalo caano ah oo leh Caag Dareen ah miridhku-Cadayn Dahabi ah oo Dahab ah si ay kuu siiso khibrad caafimaad oo cabitaan caafimaad leh.
Ku habboon caano, cabitaanka aad ugu jeceshahay, ruxrux, dusha sare, is biirsaday, ama biyo caadi ah.
Dhalada Biyaha oo leh Hawada Hawada Hawada ah si ay kuu siiso khibrad caafimaad oo aad u caafimaad qabta.
Kufiican quraacda, BBQ ', xafladaha beerta, aroosyada, dalxiisyada, safarada xeebta iyo inbadan !.
1000ml dhalo khamri ah oo cylindrical Roman ah
Ku soo bandhigida khamrigaaga ugu fiican, whiskeyga ama khamriga ku jira decanterkan si qurux badan loo qaabeeyey
Joojiyuhu wuxuu si fiican ugu habboon yahay dusha sare si loo xiro hawada si looga hortago soo-gaadhis saa'id ah oxygencognac / brandy, khamri ama vodka
Ka samaysan tayo sare leh, muraayad qaro weyn oo leh muraayad adag oo muraayad ah
Ku darista ugu fiican ee baarka gurigaaga sidoo kale waxay ka dhigtaa hadiyad heer sare ah munaasabad kasta oo gaar ah
100ml qurxinta safarka waa la dhaladayaa
Weelal qurux badan oo qurux badan oo lagu qurxiyo
Dhalo Weelka Qurxinta ah ee Bullaacadda ah ee Wax Lagu Qancin Karo Weelka Dhalada ah
Kufiican sambal sameynta ama keydinta hooska indhaha, qurxinta, kareemada iyo waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo.
Waxqabadka wanaagsan ee shaabadaynta, amniga iyo heerarka tayada.
100ml kareem qabow ayaa si gooni ah loogu dhalooyinka
Kufiican kareemada, looshannada, budada, iyo boomaatada.
Daboolku wuxuu leeyahay wareeg qalin ah oo qurux badan, heer sare ah, qurux badan.
Lagu sameeyay balaastik polypropylene fasal ah (BPA-Bilaash)
Ku habboon safarka, oo si habboon ugu habboon boorsadaada.
Dhalada saliida leh ee dhalada saliida lagama maarmaanka ah 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml
Badeecadani waxay taageertaa: shaashadda xariirta, shaabad kulul, qabow, buufin, howsha kor ku xusan waxay u baahan tahay macmiilku inuu bixiyo qoraal gacmeedka, muddada gaarsiinta waa 7-10 maalmood, khaladaad yar yar, kala duwanaanta midabka, iwm lama iska ilaalin karo, fadlan la xiriir macaamilka adeegga faahfaahinta
1000ml ahama bir dhalada cabitaanka la daboolay
Dhalo kasta waxaa ku jira BPA dheeraad ah oo aan caano-qaadasho lahayn oo caag ah - 48 MM dabool leh xir adag. Daboolka Daboolka oo shidmaya ama ka baxaya laakiin wuxuu hayaa shaabad aan caddayn karin
KU SAMEEY USA - Ma dhadhamin dhadhan xun iyo waxyaabo kiimiko ah oo ku dhex qulqulaya cabitaankaaga, muraayaddan ayaa ka madax bannaan macdanta, dib loo isticmaali karo, 100% dib loo cusbooneysiin karo, iyo bey'ada saaxiibtinimo
Dhalooyinka quraaradaha qaro weyn ee tayada qaaska ah ayaa loo sameeyaa si maalinle ah loo isticmaalo loona isticmaalo, aad uga dhumuc weyn kana sii cimri dheer kuwa kale "quraaradaha la tuuro". Mashiinka Cuntada Ammaan ah
Kaydinta Booska - Qaab gaar ah oo qaabeysan inta badan khaanadaha albaabka qaboojiyaha iyadoo lagu darayo muuqaalka caadiga ah ee dhalooyinka caanaha guridda
1000ml dhalada cabitaanka galaaska cad
Weelka saxda ah ee lagu khafiifiyo mindhicirka-caafimaadka leh, cunnooyinka xoojiya difaaca iyo cabbitaannada sida kombucha, kefir, sauerkraut, kimchi; fursadaha waa dhammaad lahayn!
Karaa oo ilaalin karaa qaybo aad u tiro badan oo ah miraha aad jeceshahay iyo khudaarta sida karootada, dhir, baaraha, yaanyada, basbaaska, iyo inbadan.
Dhalada qurxinta dhalada ee la isku qurxiyo 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml
Saxaafadda / Buufin xulasho wanaagsan oo guriga ah, laba koofi oo saxaafadeed ayaa la heli karaa.
Maaddooyinka muraayadda bilaa hogaanka u ah bey'adda ayaa sahlaya in la isticmaalo.
DHISMAHA LAGU QAADO: Dhalooyinka isdabajoogga ah waxaa laga sameeyaa muraayad qaro weyn oo waarta si loogu caabudo saamaynta iyo isbedelka heerkulka. waxaa laga sameeyaa polypropylene tayo sare leh iyo silig daboolka waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo loogu talagalay iska caabbinta daxalka u fiican
LEAKPROOF & AIR TIGHT CAP: Furka daboolka laga qaadi karo wuxuu hubiyaa waxyaabaha ku jira gudaha inay ahaadaan kuwo cusub sidii maalintii aad kaydisay. Daboolka cadeynta ee daadinta dhalooyinka wax soosaarka ayaa abuuraya carqalad hawo la'aan ah taas oo ka dhigaysa cabitaanka la xiray oo ka hortagaya kaarboonka iyo halsano.
ISTICMAALKA BADAN: Dhalada dhalada ah ee leh joojiyaha ayaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo wax kasta oo ka yimaada casiirka, khalka, cabitaanka iyo biyaha ilaa saliidaha, kefir, kombucha, beer, caano, sharoobada iyo waxyaabo kaloo badan. Iyada oo cabirkeedu yahay 1 litir, waxaad heli doontaa wax badan oo aad kaga adeegato xafladda soo socota.
SAFE & ECO-FRIENDLY: Dhalooyinka kore ee Swing waa bilaash BPA mana ku jiraan sunta, kiimikada, phthalates iyo lead, taas oo ka dhigaysa iyaga ikhtiyaar ka badbaado badan dhalooyinka caagga ah. Adiga oo isticmaalaya dhalooyinkan dhalada ah ee dib loo isticmaali karo, waxaad ku jari kartaa isticmaalka caaga gurigaaga.
50ml Caag caag ah oo caano qaboojiye ah ayaa si gooni ah loo dhalo karaa
U TAYO SARE】 Ka samaysan qalab tayo sare leh, waara oo la qaadan karo, amaan iyo caafimaad leh, dabacsan oo qafiif ah, keydinta booska, dib loo isticmaali karo, fududahay in la isticmaalo lana rakibo.
DUKAANKA DHAQAALAHA ART Qiyaasta saxda ah waxay ka dhigeysaa mid ku habboon meel cidhiidhi ah ama geeska qolka. Waxay kala sooci kartaa walxahaaga dareeraha ah si ay si fudud u kaydiyaan una istcimaalaan oo gurigaaga uga dhigaan mid nadiif ah oo nadiif ah
US ISTICMAALKA QOFKA AH】 Waxay ku habboon yihiin cadarka, jeermiska, daroogada, aalkolada iyo walxaha kale ee dareeraha ah. Si wax ku ool ah u daadi dareerayaasha kala soocista iyo isticmaalka fudud.
ORT LA HELI KARO OO LOOGU TALAGALO】 Waa mid ku habboon cabbir ahaan iyo fududahay in la qaado. Waxaa loo isticmaali karaa safarada dibada si loogu kaydiyo loona kaydiyo walxaha dareeraha ah ee aad rabto inaad qaado.
500ml dhalada cabitaanka guluubka nalka
500ml aluminium daboolan dhalada cabitaanka